Wax ka baro Taariikhda Khabiiradii ugu Horeeyay ee dayaxa taga iyo macluumaadkii aay kasoo Ururiyeen | Biyoguurenews.com
Home Wararka Wax ka baro Taariikhda Khabiiradii ugu Horeeyay ee dayaxa taga iyo macluumaadkii...
Wax ka baro Taariikhda Khabiiradii ugu Horeeyay ee dayaxa taga iyo macluumaadkii aay kasoo Ururiyeen
Shiinaha ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu ku dago dayaxa sannadka 2030-ka, iyadoo ay tobonnaan sano ka soo wareegatay howlgalkii Apollo 17, ma jiro qof bini’aadan ah oo dib ugu laabtay dayaxa.
“Ma jeceshahay inaan dayax isla booqanno”ayuu ku yiri carruurtiisa mar uu madax u ahaa kooxda fulinaysay howlgalka Apollo 16 1972-dii.
Waan xasuusta …anoo gacanta ku taagaya meesha uu dhulka ka go’ayey ” ayuu ku qoray buuggiisa.
“Kaliye qof gabyaa ah ama farshaxaniiste ah ayaa garan kara quruxda dayaxa” ayuu yiri.
Harrison Schmitt oo ku dhashay Santa Rita, New Mexico ayaa u soo barbaaray si ka duwan dadka da’diisa ah.
“Waxan fursad u helay inaan arko muqaalkan cajiibka ah” ayuu yiri
“Waxaan u maleynaya dhibaatada ugu weyn inay tahay in sawiradda ay ahaayeen kuwa mugdi ah ama madow ah. kuwa kaliye ee muuqdana ay tusinayeen calaamado buluug ah, marka ma arkaysid wax isbadel ah maxaa yeelay waxad filaysaa inuu cirka yahay madow”.
Wuxuu sheegay in xilligii uu ku jiray howlgalkaasi ay u hayd guul weyn
Tan iyo safarkii uu ku tagay dayaxa, Mr Aldrin wuxuu si joogta ah u soo jeedinayey
Previous articleGudoomiyaha Cusub ee maxkamda sare ee Ssoomaaliya Waligii Xukun Muu Go,aamin, Prof Abdi samatar
Next articleNinka Aduunka Ugu da,wayn Oo Koonfurta Afrika u Dhashay Ayaa Go,aansady in uu Joojiyo Sigaarka,